Bariga Afrika – Dawladnimo News
Home » Wararka » Bariga Afrika
December 19, 2018	Comments 547 Views
C/casiis Xasan Maxamed [Lafta-gareen] oo ka mid ahaa musharraxiintii u Tartamayay jagada madaxweynaha maamulka Koonfur-galbeed Somalia ayaa ku guuleystay doorashadii maanta dhacday Baydhabo waxaana uu helay 101 cod. Lafta-gareen oo la sheegay inay wadato Dowladda Federaalka Somalia ayaa ku guuleystay cod aqlabiyd ah, waxaana ku codad ahaan ku xigay musharrax Aadan Saran-soor oo ka mid ahaa musharraxiintii la tarmtayay. Sidaas ...
December 19, 2018	Comments 639 Views
Codeynta doorashadda Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa goordhaw lagu wadaa in ay ka bilaabato Magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka Koonfur galbeed. Doorashadan oo ah mid siweyn loo dhur sugayay mudooyinkii ugu dambeeyay ayaa sida qorshuhu yahay maanta ay xildhibaanada Koonfur galbeed dooran doonaan madaxweynihii badali lahaa Shariif Xasan Sh Aadan oo dhawaan iska casilay xilka madaxweynaha ...
December 19, 2018	Comments 575 Views
Maleeshiyaadka Daacish ayaa soo bandhigay Sawiradda iyo Muuqaalka Dagaal ay lageyn Al-shaabab,kaasi oo ka dhacay duleedka Degmada Qandala ee Gobolka Bari. Sida ay baahisay Warbaahinta Daacish ee Amaq,Dagaalka oo dhacay Axadii aynu soo dhaafnay ayaa lagu dilay 14-dagaalyahan oo ka Tirsanaa Al-Shabaab, islamarkaana hub looga qabsaday. Ma Jiro wax war ah oo kasoo baxay dhanka Shabaab oo loogu hadlaayo guulaha ...
December 19, 2018	Comments 521 Views
Ugu yaraan lix ka tirsan malayshiyaadka Al-shabaab ayaa lagu dilay duqeyn diyaaradeed oo shalay ka dhacday degaanka Miiraale oo dhanka Koonfureed kaga beegan magaalada Qandala ee gobolka Bari. Malayshiyaadka la duqeeyay oo ka soo degay dhanka buuraha Cal-miskaat ayaa laba maalmood ka hor halkaasi kula dagaallamay koox kale oo ka tirsan Daacish,sida laga soo xigtay dadka degaanka,inkastoo aan faahfaahin laga ...
December 19, 2018	Comments 572 Views
Wafdi ka socda Dowladda Dhexe ee Soomaaliya ayaa saakay ku wajahan Magaaladda Baydhabo ee Caasimadda KMG ah ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Wafdiga ayaa waxaa hoggaaminaya Wasiirka Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo dib u heshiisiinta Xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye, waaxa sidoo kale kamid ah wasiiro iyo Xildhibaano. Ujeedka wafdiga ayaa lagu sheegay sidii ay kor joogto uga noqdaan doorashada Madaxweynaha Maamulka ...
December 18, 2018	Comments 599 Views
12 kamida Musharrixiinta u tartamaya xilka madaxweynaha Puntland doorashada 8 bishaJanaayo sannadka 2019 ayaa kulan kuyeeshay magaalada Garoowe. Musharaxiintu waxaa ay kulankooda uga arinsanayeen doorashadda Puntland,waxaana ay ka muujiyeen walaac xoogan qaabka loo maamulayo doorashada sida amniga caasimadda Garowe iyo hanaanka xulista mudanayaasha Barlamaanka oo ay shegeen in ay gacan bidixaynayso xukuumadda waqtigeedu dhamanayo. warsaxaafadeedka musharrixiinta:- Anagoo ah musharrixiinta Puntland ...
December 18, 2018	Comments 485 Views
Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo dhowr jeer oo hore sheegay in uusan hoggaaminta Puntland mar dambe isu soo taagayn ayaa maanta ku dhawaaqay in markale uu u tartamayo doorashada madaxtinimada Puntland ee dhaceysa 8-da Janaayo 2019. Madaxweynaha Puntland ee wakhtigu ka sii dhammaanayo Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa ka hadal uu ka jeediyay xafladda ku dhawaaqida musharaxnimadiisa oo Garowe ka ...
December 18, 2018	Comments 417 Views
Munaasabad Kooban oo ka dhacday Magaalada Beijing ee dhalka China, Madaxweynaha Dalkaasi Xi Jinping waxa uu Warqadaha Aqoonsi Safiirnimo ka Gudoomay Danjire Cawaale Cali Kulane. Kulan gaar ah oo ay labada dhinac wada yeesheen waxa ay kaga wada hadleen ka shaqeynta Xoojinta Xiriirka Labada Dal, Is dhex galka labada Shacab iyo qodobo kale. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Dadka ee Shiina ayaa sheegay ...
Wasiirkii arrimaha gudaha iyo dowladdaha hoose ee Puntland C/llaahi Cali Xirsi Timo-cadde ayaa goordhawayd ku dhawaaqay in uu iska casilay xilkii wasiirnimo kadib shir jiraa’id oo uu ku qabtay Magaalada Garoowe. Wasiir Timacade ayaa iscasilaadiisa ku sababeeyay inay tahay sababo isaga u gaar ah hase ahaate xogo ay Horseed Media helayso ayaa sheegaya in wasiir Tima cade uu qorsheynayo in ...
December 18, 2018	Comments 451 Views